တရုတ် 3K ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ CNC ဖြတ်တောက်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Feimoshi
3K Twill Matte ကာဗွန်အပြည့် ...
3K ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း ...
3K Full Carbon Fiber ပတ်ပတ်လည် ...
3K ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ Octagon စည် ...
3K ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ CNC ဖြတ်တောက်အစိတ်အပိုင်းများ
ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစား: T/T, Paypal, Western Union
မင်း။ အော်ဒါ: 2Piece/Pieces
Delivery အချိန်: 7-15 အလုပ်လုပ်ရက်
3K ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း အစိတ်အပိုင်းများ
ငါတို့ကမင်းအတွက်လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ငါတို့သည်အရည်အသွေးမြင့်သယ်ဆောင် 3K Twill၊ Matte Finish ကာဗွန်ဖိုက်ဘာပြားများ .5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3,4& 5mm အထူ (500 X 600mm အထိ) အခြားအရွယ်အစားနှင့်အမျိုးအစားများကိုလည်းအထူးမှာယူနိုင်ပါသည်။ Carbon Fiber အနားများအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုသန့်ရှင်းစေရန်အနည်းငယ်စိုစွတ်သည်.
ငါတို့ထောက်ခံတယ် CNC ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြတ်တောက်ခြင်း, ပုံဖော်ထားသောကာဗွန်ဖိုင်ဘာအစိတ်အပိုင်း၊ စိတ်ကြိုက်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန် (ကွေးထားသောကာဗွန်ဖိုင်ဘာပြွန်၊ Octagon ကာဗွန်ဖိုင်ဘာစန်း) နှင့် Logo ဝန်ဆောင်မှု.
အရွယ်အစား: 400x500mm, 500X600mm, 600X800mm, 800X1000mm သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား
မျက်နှာပြင်: 3K/1K twill/Plain matt/Glossy
စတော့ရှယ်ယာ၊ twill matte 0.5-10.0 mm ကာဗွန်ပြားအပြည့်
၀ န်ဆောင်မှု: OEM & ODM နှင့် CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
* ပုံများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်နမူနာများကိုကြိုဆိုပါသည်။
* ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်သို့မဟုတ်နမူနာအတိုင်းထုတ်ကုန်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ကိုယ့်အတွက်အထူး။
* Hobby Carbon မှကြိုဆိုပါသည်။
မေး: ၁ ။ ငါနမူနာအော်ဒါရနိုင်သလား။
A: ဟုတ်ကဲ့၊ ငါတို့သည်နမူနာစမ်းသပ်ရန်နှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်လက်ခံသည်။ ရောစပ်ထားသောနမူနာများကိုလက်ခံနိုင်သည်။
မေး: ၂။ ဦး ဆောင်ချိန်ကဘာလဲ။
A: နမူနာမှာ ၁-၃ ရက်လိုအပ်ပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၀-၁၅ ရက်လိုအပ်သည်။
မေး။ ၃ ။ မင်းမှာ MOQ ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။
A: ကျွန်ုပ်တို့၏ MOQ သည်တရားဝင်ကုန်ကြမ်းနှင့်လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းနှစ်ခုလုံးအတွက် ၂၀၀pcs ဖြစ်သည်။
မေး။ ၄။ သင်ရောစပ်ထားတဲ့ကွဲပြားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလက်ခံနိုင်လား။
မေး။ ၅။ သင်ဘယ်လိုကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ပြီးဘယ်လောက်ကြာအောင်ရောက်လာသလဲ။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည်များသောအားဖြင့် DHL, UPS, FedEx သို့မဟုတ် TNT တို့ဖြင့်ပို့ဆောင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ၃-၅ ရက်ကြာသည်။
စံပြ Carbon 3K Fiber ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ မင်းဖန်တီးမှုကိုကူညီဖို့ငါတို့မှာစျေးပေါတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ CNC ၏တရုတ်မူလစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းတစ်စုံတစ်ရာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ယခင်: ရိုးရိုးတောက်ပသောသို့မဟုတ် matte ကာဗွန်ဖိုင်ဘာစာရွက်ကိုရက်လုပ်ပါ
3k full Carbon fiber တစ်ပြားကတ်ကီးဘုတ်
CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် 3K full Carbon Fiber Sheet Frame
CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း Carbon fiber Structural Shapes plate
3K Laser သုံးကာဗွန်ဖိုင်ဘာအပြည့်စာရွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း ...
CNC ဖြတ်တောက်ခြင်း twill matte ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ rc ကား cha ...
RC ပြိုင်ကားအစိတ်အပိုင်းများအတွက် 3K Carbon Plate Shape